Sei uchifanirwa kushandisa makondomu kana une utachiona hweHIV? | Kwayedza
06 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-05T16:20:03+00:00 2019-09-06T00:03:18+00:00 0 Views
Kushandiswa zvakanaka kwemakondomu kunodzivirira kutapurirana utachiona hweHIV nezvimwe zvirwere zvepabonde.
SANGANO reNational AIDS Council range riri kutambira mibvunzo yakawanda kubva kune vanhu vane utachiona hweHIV vachida kuziva kuti sei vachifanirwa kuti vashandise makondomu.
Kunyangwe avo vari muwanano vanofanirwa kushandisa makondomu. Pane mafungiro akashata ekuti kana vanhu vaviri vari muwanano kana vese vane utachiona hweHIV hazvina basa kuti vashandise makondomu. Izvi handizvo, inhema. Tsamba iri kutevera yakatambirwa uye mhinduro yakapihwa namazvikokota watakabvunza inogona kubatsira vamwe vanhu vari munyaya dzakadai.
Ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Ndakaroorwa uye ndine mwana mumwechete. Murume wangu neni tose takavhenekwa tikaonekwa tiine utachiona hweHIV mugore ra2013 uye tese tiri pachirongwa chekunwa maARV. Takakurudzirwa kushandisa makondomu uye taimashandisa kubva pese apa.
MunaChikumi gore rino, murume wangu akandiudza kuti aneta nekushandisa makondomu sezvo achiti tese tine utachiona. Ndakaedza kumurangaridza zvatakange taudzwa kukiriniki ndokubva andirova. Tange tiri kungorwa kubva munaChikumi uye ndave kushungurudzika. Ndapota ndibatsireiwo
Waita basa nekundinyorera. Ndinofara kuti unoziva kuti sevanhu vari muwanano vane utachiona hweHIV mese munofanirwa kushandisa makondomu pese pamunoenda pabonde.
Chekutanga, rega ndikutsanangurire kuti sei vanhu vane HIV vari kugara nevanhu vane HIV vachifanirwa kushandisa makondomu. Kana vanhu vaviri vane HIV vachigara muwanano, njodzi iri pakuenda pabonde musina kuzvidzivira kutapurirwa humwe utachiona pamusoro pehumwe.
Kutapurirwa humwe utachiona kunoitika kana ukaenda pabonde usina kuzvidzivirira wosangana nemunhu ane HIV. Umbowo hwakaonekwa kuti kutapurirwa patsva kunoitika uye kunokonzera kuti hutano hwemunhu ane HIV hudzikire zvakanyanya.
Pane kushushikana kukuru kunouya neHIV. Mukuwedzera, kana uchinwa mushonga, HIV inoshanduka nekufamba kwenguva. Kana munhu akatapurirwa patsva utachiona hweHIV yakasiyana neyagara yange iripo kana yashanduka yacho yapinda mumuviri wemunhu kuburikidza nebonde risina kudzivirirwa, kurapwa kwayo kunonetsa chaizvo uye kunogona kutadza kushanda. Nekufamba kwenguva HIV yapinda mumuviri inotanga kukura yoshaisa simba mushonga wange wave kushanda. Saka mukudaro viral load inobva yave pamusoro nhengo dzemuviri dzokuvadzwa.
Kana pakati penyu pasina anotora anti-retroviral therapy (ART) saka zvinobva zvaita nyore kuti mutapurirane utachiona kune mumwe, zvichireva kuti nzira dzekurapwa zvakanaka dzinove dzishoma.
Chero zviite sei, musasiye kushandisa makondomu. Vaye vanotora mishonga yavo vanogara zvakanaka kwenguva refu, vane hutano hwakanaka. Asi izvi zvinogona kukonzeresa kufara kune vamwe kuti vashandise dziviriro panyaya dzebonde. Kufunga kusina kunaka kuti HIV haichatyise sezvo mishonga yekurapa yave kuwanikwa. Zvimwe zvirwere zveHIV zvakazonyuka nekuda kwevanhu vanotadza kuchengetedza mirairo yekutora mishonga chaizvo uye nguva chaidzo.
Ipa mashoko aya kune murume wako uye kana asina kugutsikana enda pachipatara chiri pedyo mugopihwa rumwe ruzivo rwakawanda.
Ndine hurombo kuti unorohwa mumba. Kushungurudzwa mumba kwakashata uye imhosva huru pamutemo. Tsvaga rubatsiro zvisati zvashata.
PIX: Kushandiswa zvakanaka kwemakondomu kunodzivirira kutapurirana utachiona hweHIV nezvimwe zvirwere zvepabonde.